Somaliland oo beenisay in garoonka diyaaradaha Hargaysa lagu xanibtay M. Galmudug | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Somaliland oo beenisay in garoonka diyaaradaha Hargaysa lagu xanibtay M. Galmudug
Somaliland oo beenisay in garoonka diyaaradaha Hargaysa lagu xanibtay M. Galmudug
Agaasimaha guud ee wasaaradda Duulista Hawada ee maamulka gooni isu-taaga ah ee Somaliland, Cumar Cabdullahi Aadan oo loo yaqaano Cumar Sayid, oo maanta oo Isniin ah shir jaraa’iid ku qabtay magaalada Hargaysa ayaa beeniyay war kasoo baxay madaxwaynaha maamulka Galmudug.
Hadalka madaxwaynaha Galmudug oo ahaa in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay garoonka diyaaradaha magaalada Hargaysa ku xanibtay diyaarad uu kasoo raacay dalka isu-tagga Imaaraadka Carabta.
Cumar Sayid, agaasimaha guud ee wasaaradda Duulista Hawada maamulka Somaliland ayaa sheegay in warka kasoo yeeray madaxwaynaha Galmudug, uu yahay mid sal iyo raad midna lahayn islamarkaana dowladda Soomaaliya aysan awood u lahayn inay xanibaad kusoo rogto diyaarad fadhida magaalada Hargaysa.
“Ninka sheegta inuu yahay madaxwaynaha Galmudug warka kasoo yeeray waa been, dowladda Soomaaliya kama taliso Hargaysa wax xanibaad ah oo lagu soo rogayna ma jirin. Soomaaliya iyo Somaliland waa labo dowladood oo kala maqan muddo ka badan 27 sano, Hawada Somaliland-na ayada ma maamusho” ayuu yiri Cumar Sayid oo warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargaysa.
Anaga ninkaas maba ogayn inuu yahay madaxwaynaha Galmudug, waxaa uu ka mid ahaa rakaabka diyaaradda Fly Dubai oo garoonka diyaaradaha Hargaysa taransit ku ahaa, wax xanibaad ah oo lagu soo rogayna ma jirin, ayuu hadalkiisa raaciyay.
Madaxwaynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf, ayaa shalay dowladda Soomaaliya ku eedeeyay inay amartay in isaga lagu xanibo garoonka diyaaradaha Cigaal ee magaalada Hargaysa.
Mr. Xaaf, ayaa dhowaan ku dhawaaqay in maamulkiisa uu taageeray xulafada Sacuudiga ee cunoqobataynta ku haya dalka Qaaska dabiiciga ah qaniga ku ah ee Qadar.
Warkaasi ayaa keenay in khilaaf deg deg ah uu soo kala dhex-galo madaxda maamulka Galmudug.
Madaxwayne ku xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi ayaa sheegay in madaxwaynaha kaligiisa uusan qaadan karin go’aankaasi.
Dowladda federal ka ah ee Soomaaliya ayaa khilaafka dowladaha baah-wadaagta ah ee Khaliijka ka qaadatay go’aan dhex-dhexaadnimo ah, halka maamulada dalka ka jira ee dowladda federalka hoos yimaada badankood ay sheegeen inay taageersan yihiin xulafada xiriirka u jaray cunoqobatayna kusoo rogay dalka Qadar.
Previous articleSafiirada Soomaaliya u fadhiya ku dhowaad 10 Wadan oo lagu wargaliyay inay dalka ku soo laabtaan (Akhriso)
Next articleM. Farmaajo oo lacagtiisa indho fiiqis ugu sameeyay 100 qof lana kulmay bulshada rayidka (Sawiro)